Okuwukuphela Kwetimu Oyoze Uyidinge yeWordPress: Avada | Martech Zone
Sekuyiminyaka eyishumi ngakha ama-plugins wesiko futhi ngishicilela, ngilungisa futhi ngakha izingqikithi zenkambiso, futhi ngisebenzisa i-WordPress kumakhasimende. Kube yi-roller coaster impela futhi nginemibono eqinile kakhulu ngokuqalisa engikwenzele izinkampani ezinkulu nezincane.
Bengibuye ngigxeke abakhi - ama-plugins nezindikimba ezivumela ukuguqulwa okungavinjelwe kumasayithi. Ziyakhohlisa, zivame ukufuthanisa ngosayizi wamakhasi ewebhusayithi ngenkathi zinciphisa isiza kakhulu. Iningi lomsebenzi esiwenzayo lapho sithatha umsebenzi wokuthuthukisa iwebhu kumakhasimende lisusa amakhodi okuphathelene namakhompiyutha angagcini nje ngokubambezela isiza kodwa futhi avimbela kakhulu amandla enkampani okwenza ushintsho kusayithi lawo.
I-Welcome Theme Fusions 'Avada
I-Theme Fusion yakhe ngokwethembeka inhlanganisela yetimu ne-plugin engake ngasebenza nayo # 1 itimu yokuthengisa yaso sonke isikhathi, i-Avada. Idizayinwe kahle ngokwethembeka ukuthi ngiyayisebenzisa kuwo wonke amasayithi ami nakuwo wonke amaklayenti ami. Isici ngasinye sokwakha sivumela ukwenza ngokwezifiso okuncane - into ofuna ukuyikhiya ngempela ukugwema iklayenti noma umhleli okhuluphele ngokweqile ukwenza ngokwezifiso uphawu lomkhiqizo wesayithi nokwethula izinkinga ezidinga umsebenzi omningi ukulungisa.
Baphinde bagcina ingqikithi ihlukile kwi-plugin, inika amandla amandla kothile ukuthi empeleni akwazi ukufaka itimu entsha - ngenkathi egcina ukusebenza kokwakhiwa ngokwezifiso kusethi yama-plugins. I- Itimu ye-Avada yinhle, ithuthuke kahle, futhi kulula ukusebenzela kuyo. Joyina amakhasimende anelisekile angaphezu kuka-380,000 ekuthengeni le timu emangalisayo!
Bheka Izibonelo ze-Avada
Our DK New Media Isayithi liku-Avada
Selokhu ngakha isiza sokuqala se-Avada, bengisebenzisa le timu yawo wonke amaklayenti ethu. Futhi, ekugcineni ngivuselele eyethu DK New Media isayithi futhi. Bheka ukuthi yinhle kangakanani - futhi kwakulula kakhulu ukuyakha ngenkathi iphendula ngokuphelele.
Izakhiwo ezitholakala ngale ngqikithi zingenamkhawulo, zinamakhulu ezinto namakhono avele enze kube yiphupho lokuqalisa. Ngithanda kakhulu ukuthi ngingagcina iziqukathi nezinto zokuphinda zisetshenziswe emhlabeni wonke kwamanye amakhasi ngisebenzisa i-Fusion Builder. Luhlelo oluphelele lokwakha ikhasi olukhiqiza izakhiwo eziqhutshwa yifayela le-CSS ngaphakathi kwesayithi kunokufaka amakhasi we-mega ngaphakathi.
Izici ze-Fusion Builder Faka
Inhlanganisela Yekholomu Eyakhelwe Ngaphambili - Esikhundleni sokungeza ikholomu eyodwa ngasikhathi, ungakhetha kalula ukwengeza amasethi agcwele wawo wonke usayizi wekholomu esiwanikezayo kusuka kumakholomu we-1-6.
Goqa izingxenye neziqukathi - Goqa noma isiphi isitsha esisodwa ngokuchofoza ukuze ulondoloze indawo yokuhlala esikrinini, noma ugoqe zonke iziqukathi ngasikhathi sinye endaweni enkulu yokulawula ibha.
Qamba Kabusha Iziqukathi - Mane ubeke isikhombisi sakho egameni lesitsha bese usinika igama. Lokhu kukuvumela ukuthi ukhombe ngokushesha futhi kalula izigaba ekhasini lakho shazi.
Hudula bese ulahla ama-Element Elements - Izinto ezinjengamathebhu, amabhokisi wokuqukethwe, ama-toggles nokuningi okuvumela ukwenziwa kwezinto ezingaphezu kwesisodwa manje kungahlelwa kabusha ngokuhudula bese uphonsa.
Amagama Angokwezifiso Wezinto Zengane - Isixhumi esibonakalayo se-Fusion Builder sithatha isihloko esikhulu sento yengane oyifakayo futhi siyiveze ngokuhlonza okulula.
Sesha Umsebenzi ukuze uthole kalula izinto nezinto - Isiqukathi ngasinye, ikholomu, newindi lezinto linenkambu yokusesha ngakwesokudla phezulu ukusesha kalula futhi uthole okudingayo ngegama elilodwa elingukhiye.
Thenga i-Avada Theme Manje
Luhle uhlelo. Nayi i-rundown yezici ezibalulekile ze-Avada:
Ukudalulwa: Ngingumuntu oxhumana naye oziqhenyayo we-Themeforest lapho i- Itimu ye-Avada kuyathengiswa.
Tags: i-avadaisihloko se-wordpress esihle kakhuluFusionumakhi we-fusionisihloko se-fusionumakhi wekhasiindaba ephathwayoingxubevange yetimuWordPressisihloko se-wordpress